Qof dambi dil ah oo uusan geysanin loogu xukumay 65 sano oo xarig ah - BBC News Somali
Qof dambi dil ah oo uusan geysanin loogu xukumay 65 sano oo xarig ah
9 Abriil 2018
Lahaanshaha sawirka Image copyrightWSFA 12 NEWS
Image caption Lakeith Smith ma uusan dilin cidna, balse dambi dil ah ayaa lagu heley
Dalka Maraykanka qasab ma ahan in aad disho qof si laguugu xukumo dambi ah in aad dil geysatay, waxaa jira sifooyin kale oo qofka ka dhigi kara dilaa isaga oo aanan cidna dilin. Haddaba sidee ayay suurtogal ku tahay taas?
Wiil lagu magacaabo Lakeith Smith ayaa lagu xukumay 65 sano oo xarig ah garsoor kadib markii uu dhintay wiil saaxiibkiis ahaa oo lagu magacaabo A'Donte Washinton, kaas oo uu toogasho ku diley askari booliiska ka tirsan.
Lakeith iyo saddex kale oo saaxiibadiis ah ayaa sanado ka hor fal tuugonimo ah ugu dhacay guryo dariskooda ah, kadibna dadkii guryaha lahaa ayaa booliiska u yeeray.
Markii ay booliiska yimaadeen ayay illinka isku qabteen wiilashii dhaca geysanayay oo baxsad ah iyo booliiskii oo gurmad ah, kadibna wiilashii waxa ay u baxsadeen gadaal si ay darbiga uga boodaan, waxaase dhacday in ay booliiska rasaas huwiyaan tuugada, rasaastaas oo uu ku dhintay A'Donte Washington oo ka mid ahaa kooxda tuugada ahayd.
Wax muran ah kama jirin in rasaasta wiilka dishay uu riday askari ka tirsan booliiska Millbrook ee gobolka Alabama, sababtoo ah kaamaradii jirkiisa ku xirnayd ayaaba duubtay waxa dhacay oo dhan.
Xeerbeegti dacwada dhagaysatay ayaa diiday in askariga uu geystay wax qalad ah, iyaga oo xukumay in rasaasta uu riday uu ku riday sifo sharci ah.
Maraykanka oo weeraray raadeerada Yemen
Saddex ruux oo lagu dilay iskuul ku yaalla Maraykanka
Askariga badalkiisa , dambiga dilka waxaa qoorta loo suray Smith, waxaana lagu heley in uu dilay wiilka marka la tixraaco sharciga ka jira Alamaba iyo gobolo kale oo badan oo Maraykanka ku yaala, kaas oo dhigaya in qofka uu qaadanayo sifada dilaanimada haddii uu si uun sabab uga ahaa dilka ama qeyb ka ahaa dambi dhacay dambiga ka hor.
Tusaale haddii tuug isaga oo wax ka dhacaya qof, qofkii uu wadne xanuun kusoo boodo oo uu dhinto, tuugaas waxaa loo aqoonsanayaa dilaa.
Nin waxaa jiray lagu heley dil maadaamaa uu baabuurkiisa siiyay nin kale oo dil ku geystay.
Arrinta Smith waxa ay kuwa kale kaga duwantahay ayaa ah in uu diiday in uu qirto dambiga, markaas oo lagu xukumi lahaa ugu badnaan 25 sano oo xarig ah, taas badalkeeda waxa uu codsaday in dhagaysi dacwadeed oo dheer la galo, taas oo muddo kadib lagu heley in uu dambiga geystay, laguna xukumay 65 sano oo xarig ah.
Wiilashii kale ee falka la geystay ayaa iyagu qirtay dambiga, waxayna sugayaan in la xukumo.
Andre Washintong oo ah aabaha dhalay wiilka la dilay ee A'donte ayaa ka qaybgalay dhagaysiga, balse waxa uu fariistay safka Smith, isaga oo sheegay in uu taageersanyahay Smith, wuxuuna intaas ku daray in wiilkiisa ay booliiska dileen.